Nchọgharị Na-akwụ Ogwọ Na-achọ Ọchụchọ Organic? | Martech Zone
Nchọta Na-akwụ Ogwọ Na-achọ Ọchụchọ Organic?
Econsultancy mere otu isiokwu na nso nso a Nsonaazụ ọchụchọ akwụgo na -achọ peeji nke nsonaazụ ọchụchọ engine. Ọ bụ ezie na nke a na-abawanye uru na ego enwetara na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ahụ, enweghị m nchekwube na ọ na-abawanye uru maka onye ọrụ ọchụchọ.
A bụ ihe nseta ihuenyo nke “kaadị akwụmụgwọ” search engine nsonaazụ peeji nke:
Nke a bụ nnukwu ozi sitere na WordStream na arụmụka nke akwụ ụgwọ na nyocha ọchụchọ. Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa nwere ike ịrụ ụka maka nke nwere mmetụta karị, ma ọ bụrụ na Google na-aga n'ihu na-ebelata ngalaba nyocha nke ahịhịa na-enweghị oke arụmụka. Echere m na ọ ga-abụ ụbọchị dị nro n'ịzụ ahịa n'ịntanetị mgbe nnukwu ụlọ ọrụ enweghị ike ịrụ ọrụ siri ike iji zụlite nnukwu ọdịnaya ma nwee nlebara anya kwesịrị ha.
Google na-azo ahia SEO
Jul 26, 2012 na 4: 17 AM
Ọ bụdịghị ajụjụ. “Soro Ego ahụ.” Google emeela mgbanwe ya niile ọ bụghị n'ihi na nsonaazụ ya dị njọ. Oge ụfọdụ ndị mmekọ na - enyekwu ozi - ọ bụ nyocha nwere ike ị nweta ihe iji tọghata. Google mere mgbanwe ndị ahụ n'ihi na ha anaghị enweta ego ọ bụla na SEO. Ya mere, ha gara na saịtị buru ibu / akara ka ha were ego na Adwords kama SEO. Na mgbe ahụ ha nwara ịkwụ ndị na-eji Google+ ụgwọ ka ha nwee ike nweta data.
N'ebe ahụ ịgbachitere, ha ga-adọ aka na ntị na njikọta “spam” - aka na agbanyeghị ị nwere ike ịme njikọ maka onwe gị - ebe 2008. Anyị achọghị ige ntị. Naanị ịchọrọ ka m nwee ngwaahịa na PRWeb tupu oge opupu ihe ubi 2011.
Jul 27, 2012 na 5: 46 AM
Nnukwu ihe omuma nke oma. Beisde a mgbe penguuin melite google akwụ obere ntị ka organic search. Ọrụ SEO metụtakwara nke a. Adsgwọ mgbasa ozi na-eto eto.
Olileanya na mmelite na-esote ga-adaba na ndu.
Daalụ maka òkè